कति क्रूर हुन सक्छ मानिस ? फलमा बम राखेर मारे हात्ती ! (भिडियो)
मानिसले पशुप्रति गर्ने क्रूर व्यवहारको खबरहरू प्रायः आइरहेका हुन्छन् ।
भारतको केरलमा यस्तै क्रूरताको समाचार आएको छ । त्यहाँ एक गर्भिणी हात्तीलाई मानिसहरूले भुइँकटहरमा बम राखेर खुवाएका छन् । फलभित्रको बम पड्किएर हात्तीको मुखमा गम्भीर चोट लागेपछि एक हप्तासम्म तड्पिएर उसको देहान्त भएको छ ।
जंगलमा बस्ने हात्ती खाना खोज्दै नजिकैको गाउँ पुगेको थियो । सडकमा जाँदै गर्दा गाउँका पापीहरूले उसलाई भुइँकटहरमा बम राखेर दिए । भुइँकटहर खाँदै गर्दा बम विस्फोट भयो र उसको मुख अनि सुँढ नराम्रो चोट लाग्यो ।
घाउले निकै पीडा दिएपछि हात्ती छटपटिँदै हिँड्यो । तर छटपटिए पनि हात्तीले मानिसको घरखेतमा कुनै हानि गरेन । गाउँको बाटोमा पीडाले चिच्याउँदै हिँडिरह्यो ।
हात्ती वेल्लियार नदी पुगेर त्यसमा उभिइरह्यो । पानीमा पीडाबाट अलिकति भए पनि उसले राहत पायो ।
हात्तीलाई अब म बाँच्दिनँ भन्ने लागेर होला वन विभागका कर्मचारीले उसको उद्धार गर्न पठाएका दुई हात्तीलाई पनि मतलब गरेन । नदीमै उभिइरहेको अवस्थामा गत बुधवार अपराह्न ४ बजे हात्तीले प्राण छोड्यो ।
गाउँले र वन अधिकारीहरूले उसको शव एउटा ट्रकमा राखे अनि जंगलमा गएर अन्तिम संस्कार गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा यसको खबर आएपछि मानिसहरूले बम राख्ने पापीहरूलाई बेस्सरी गाली गरेका छन् । यस्तै राक्षसहरूका कारण कोरोनाभाइरस जस्ता महाव्याधि आउने गरेको भनी मानिसहरूले लेखे ।
साउदी अरबबाट भारत आइरहेको विमान बेस्सरी हल्लिँदा ...
झ्यालबाट आउने चर्को आवाजलाई आधा घटाउने डिभाइस बन्य...
कैलाश पर्वतसँग जोडिएको रहस्य, के साँच्चै भगवान शिव...